Wondershare MobileTrans User Guide - iCloud ndabere ka iOS
MobileTrans Guide: iCloud ndabere ka iOS
Nzọụkwụ 2. Na Primary Ohere, họrọ "Weghachi si Backups". Họrọ "iCloud" site nke pụrụ ịkpata nhọrọ. Banye na gị iCloud akaụntụ.
Nzọụkwụ 3. Jikọọ gị iOS ngwaọrụ gị na kọmputa na-eme ka n'aka na ọ bụ ghọtara site MobileTrans.
Nzọụkwụ 4. Họrọ iCloud azụ elu faịlụ ị ga-achọ nyefee faịlụ site na. Buru n'uche na ị ga-eche maka iCloud ndabere ibudata.
Nzọụkwụ 5. Pịa "Malite Copy" iji malite usoro. Ị nwekwara ike ịhọrọ ikpochapụ data na ebe ekwentị tupu edegharị data. I nwere ike ime nke a site ịlele ahụ "Clear data tupu oyiri" igbe dị n'okpuru ebe ekwentị.
Ọzọ: iCloud ndabere ka Android